PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - AHLOMA NGABANESIPILIYONI AMAKILABHU AKWI-NFD
AHLOMA NGABANESIPILIYONI AMAKILABHU AKWI-NFD
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
IGCINE isayinise isiqonqwane irichards Bay FC egijima kwinational First Division (NFD) ukuzama ukuvala ukuvuza kwamagoli kule kilabhu.
ILANGA Langesonto lithole ukuthi usifiso “Jomo” Biyela ongumnikazi webay FC, ugcine esayinise ujunaid Sait oke wagijima kwi-ajax Cape Town eqashe umqeqeshi omusha ngolwesine, u-andries Ulderink wasenether- lands.
Ubiyela utshele leli phephandaba ukuthi babone usait ezokwazi ukubaxazululela inkinga yokuvuza kwamagoli kwezakhe. Uthi okuhle nakakhulu wukuthi uza nesipiliyoni esidingekayo. Uthi imidlalo YENFD isizoqala ukushuba kwazise wonke amakilabhu asevukile emaqandeni.
“Ngeke singene emakethe noma yikanjani, yingakho sihlunga kahle abadlali esiwazi kahle amakhono abo. Phela isizoqina kakhulu imidlalo ezayo,” kusho ubiyela.
Uqhube ngokuthi kukhona abadlali abangase babakhombe indlela.
“Nokho okwamanje sisaxoxisana nabaphathi babo (ngodaba lokunqanyulwa kwezinkontileka zabo). Kasifuni ukuxhamazela,” kusho ubiyela.
Kuzo ezenfd, ireal Kings izophinde ivakashele ijomo Cosmos kowenedbank Cup namuhla ngesonto ngo-15h00 evosloorus Stadium, egauteng. Nakuba lo mdlalo uzokuba nzima kwikings kodwa ingase isizwe wukuba nabadlali